ဖူးနုသဈ: နိယာမတှေ မှားပွီလား
Posted by ZT at 3:05 AM
ဉာဏ်မမီဘူး ဆိုတာ ဝန်ခံပါတယ်း)
တကယ်သာ စွမ်းအင်တွေကို ပွားယူနိုင်ရင်တော့ “နှစ်ဆတိုးတာဟာလေ ကျနော်တို့ ဗမာ့တန်ခိုးပါဗျ” လို့ ထကြုံးဝါးလို့ရပြီ။ မြန်မာပြည် လျှပ်စစ်မီး အလျှံပယ် သုံးနိုင်ပြီ။
wowww...wha ha ha ha ha ...ha ha :) :D.
i m ur junior from your high school.
i think you might heard about the sayar puu zaw pwae on 28 March 2010.
i heard that they need more funds for teachers.
အဲသည်လိုမျိုးစက် အောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေ နိုင်ငံခြားမှာလည်း မကြာမကြာပေါ်လာတတ်တယ်။ နည်းပညာကတော့ အမျိုးမျိုးပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အားလုံးမှာ တူတာ တချက်တော့ ရှိသဗျ။ ဘာလဲဆိုရင်...
“တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အထိဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ငွေကြေး မ တည်မဲ့လူလိုနေတယ်။ ငွေကြေးအရင်းအနှီးလိုနေတယ်” ဆိုတာမျိုးချည်းပဲ။
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ။ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စက်ကြီး တီထွင်ထားတယ် ဆိုပြီး.... တကယ်အလုပ်လုပ်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့နောက် သူများတွေကို ဘာလို့ အစုရှယ်ယာတွေ ခေါ်နေတော့မလဲ။ သက်ဆိုင်ရာမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ရောင်းတော့မှာပေါ့။ ဖြစ်ရပ်တိုင်းမှာ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် တကယ် အလုပ်မလုပ်သေးတဲ့စက်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒီကိစ္စကို “ဘော်ချက်”တယ် (အကြံအဖန်လုပ်တယ်)လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ ဒီထက်နာအောင်ပြောရရင် နားမလည်တဲ့လူတွေကို လိမ်စားချင်တာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မီးတွေထိန်ထိန်လင်းတော့မှာမို့..သာဓုခေါ်မယ်ကြံကာရှိ သေး...ကိုကိုZT ကပြောတော့ အားငယ်သွားတာပဲ..
ဒီလူဟာ ၁၂ ကီလိုဝပ် အားရှိတဲ့ မီးစက်ကို နာရီဝက်(သို့မဟုတ်) တနာရီ လောက်ကြာအောင် မောင်းပြီး ဘွိုင်လာထဲမှာ ရေနွေးငွေ့ဖိအားများလာအောင် နီခရုမ်းနန်းကြိုးခွေတွေကို အပူပေးမယ်။ ဘွိုင်လာထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေနွေးငွေ့ဖိအားရလာရင် တာဘိုင်ဒလက်တွေကို မောင်းပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ယူမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘွိုင်လာထဲရှိ ရေနွေးငွေ့ဖိအားရယ်၊ တာဘိုင်နဲ့တွဲထားတဲ့ ဂျင်နရေတာရဲ့ ဝပ်အားအပေါ်မှာရယ်မူတည်ပြီး အထွက်ဖက်မှာ လျှပ်စစ်ကို ၁၂၀ ကီလိုဝပ်အား ထုတ်ယူဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိပြုရမှာက သူဟာ ၁၂ ကီလိုဝပ် ပါဝါကို တစ်နာရီကြာ စွမ်းအင်တွေ ထည့်သွင်း မောင်းနှင်ခဲ့ပေမယ့် အထွက်ဖက်မှာ ၁၂၀ ကီလိုဝပ် ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာတော့ ၁ မိနစ်ခန့်မျှသာ ထုတ်နိုင်တာမျိုးဆိုရင် ဒါဟာ စွမ်းအင်ရှုထောင့်ကကြည့်တဲ့အခါ အချည်းနှီးပဲ။ အဝင်နဲ့အထွက် တဒင်္ဂအတွင်းမှာ တိုင်းတာလို့ရတဲ့ စွမ်းအားအချိုးအစားနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ စွမ်းအားတွေကို ဆပွားပြီး ထွက်လာတယ်လို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဘာမှ အကျိုးရလဒ်မရှိဘူး။ kWh ကီလိုဝပ်အာဝါ နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် သူ့စက်ကြီးဟာ လုံးလုံး အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို အခုခေတ်မှာ ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ Fusion Power အကြောင်း ပြောပြပြီး အဲဒီနယ်ပယ်မှာ ပညာတော်သင်အနေနဲ့ စေလွှတ်ရရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ဒီနည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာ့မူ ပိုင်ခွင့်ကို လှမ်းမယ်ဆိုပါလား..
hak hak ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်သိပေါ့ဗျာ......